Car Bal Dadweynow Keebaan Dooranaa? – Rasaasa News
Sep 26, 2009 AFD, SPDP
Ma SPDP ayaad dooran maanta?
Mise AFD ayaad dooran bari?
Hadii ay muddo labaatan sano ah ay ummada Somalida Ogadeniya wadatay qori, kaas oo noqday xalka ugu dambeeya ee ay xaqooda ku doonaysay ummada Somalida Ogadeeniya, siyaasadaas waxaa ku hogaaminayey ummada Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo], oo kol noqotay Jabhadaha xornimo doonka ah kuwa ugu caansan.
Intii uu socday halganka qoriga ah waxaa ka dhacay dhulka Somalida Ogadeeniya burbur dhinac walba leh iyada oo ay xukuumada Tigray u adeegsatay wax walba sidii ay u joojin lahayd halganka ay wado Jwxo.
Waxaa Jabhada ONLF sanooyinkii ugu dambeeyey gacan milatari siiyey xukuumada Eritrea oo ay colaadi dhex taalay iyada iyo Itobiya, kaalmayntaas xukuumada Eritrea ayaa waxay keeni lahayd hurumar uu sameeyo halganka ay waday ONLF, waa hadii uu ururka raaci lahaa shuruucdiisa Jabhadeed, balse waxaa uu burbur yimid kolkii uu hogaanka Jabhadu u dhaqmay sidii dawlad xoriyad haysata oo kale.
Waxaa Jabhada soo gaadhay khasraare xoog leh kolkii khilaaf soo kala dhex galay la xalin waayey, waxaa itobiya isu dhiibay boqolaal hore uga tirsanaa ciidanka Jabhada oo lagu soo tababo baray dalka Eritrea. Ciidankaasi oo bilaabay in ay ururka kula dhex dagaalamaan gudaha Ogadeeniya iyaga oo la saf noqday dhinac maamulka Kilalka 5aad, oo isagu aad uga faa,iidaystay khilaafkaas.
Hogaanka ONLf, waxaa uu badalay mabaa,dii Jabhadeed, ka dib kolkii uu heshiisyo aan waxba ugu filay ONLF iyo ummada Somalida Ogadeeniya la galay ururo Itobiyan ah oo doonaya in ay xukunka ka ridaan KT Meles, kuwaas oo aan aqoonsanayn mabaa,dii ururka ONLF. dadweyanaha Somalida Ogadeeniya waxaa uu ururka ONLF ku taageerayey mabaadii, taas oo ah in dhulka Somalida Ogadeeniya uu ka go,o gabi ahaanba Itobiya, wax xukun ahana uusan ka doonayni xukuumad kasta oo qabsata Itobiya qaybsada, ONLF xukun kama doonaynin Itobiya ee waxa ay u dagaalamayso waa xornimo.
Waxa jira Maamulka Kaalinka 5aad oo xukuumada Tigray la shaqeeya tan iyo intii ay xukunka Itobiya qabsadeen, maamulkaasi wuu qancin waayey dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waxayna dadweynuhu doorteen in ay taageeraan ururka ONLF, oo ah miciinka kaliya ee ay ummadu ka dhur sugayso.
Halganka loo dhintaa waa uu dhamaaday, waayo waxaan filayaa in ayna ka daahnayn umada Somalida Ogadeeniya arimaha foosha xun ee halganka galay, ee uu Jwxo-shiil, ka shaqeeyey.
Hadaba, nasiib darada haysato ummada Somalida Ogadeeniya waxaa weeye, Jabhadii ONLF ee ay dadweynuhu ka dhursugayeen waxay noqotay dhurwaayo iyagu is cunaya, waxay tirtireen mabaadii aan ku dagaalamaynay ee aan dad iyo duunyaba ku beelay, waxayan jeclaysteen qaarkood in marka KL Melse laga qaado xukunka in Itobiya wax lala qaybsado oo laga mid noqdo.
Maamulka Kaalinka 5aad, waxaa uu in badan ku baaqayey in xukuumadan aadka inoo danaynaysa wax lala qaybsado, maadaama ay tahay xukuumadii Itobiya xukunta ee ugu horeysay ee doonaysa in ay wax ka qabto xaq daradii ina haysatay.
Hadab, dadweynah Somalida Ogadeeniyow waxaan idin weydiinayaa Keebaynu raacnaa labadan urur ee midna lee yahay aan maantaba aynu baryootano, kuna lee yahay maya bari aynu baryootano.
Masuuliyiinta Kaalinka 5aad oo Daw u Yeeshay Dumaasha ONLF